दीपिका पादुकोणकी बहिनीले कसरी कमाउँछिन् दिदीभन्दा बढि ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood दीपिका पादुकोणकी बहिनीले कसरी कमाउँछिन् दिदीभन्दा बढि ?
दीपिका पादुकोणकी बहिनीले कसरी कमाउँछिन् दिदीभन्दा बढि ?
काठमडौं । ११ वर्षदेखि राज गरिरहेकी छिन् दीपिका पादुकोण फिल्म उद्योगमा । अब दीपिका बलिउडमा मात्र नभई हलिउडमा पनि आफ्नो अभिनय कला देखाइ चर्चामा छिन् ।
हरेक ठूला कलाकार उनीसँग काम गर्न चाहन्छन् । यी ११ वर्षमा दीपिकाले निकै नाम कमाइन् । तर आज हामी तपाईंलाई दीपिकाको नभई उनकी कान्छी छोरी अनिशा पादुकोणबारे बताउनेछौं ।
दीपिकाकी बहिनी अनिशाा उनीभन्दा ५ वर्ष कान्छी छिन् । सन् १९९१ मा जन्मिएकी अनिशा एक गोल्फर हुन् जसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।
उनी गोल्फमा नै आफ्नो करियर बनाइरहेकी छिन् । अनिशा माउन्ट कार्मेल कलेजमा पढेकी हुन् । गोल्फका साथै उनी क्रिकेट, हकी, टेनिस र ब्याट्मिन्टन पनि खेल्छिन् ।
अनिशाले १२ वर्षको उमेरदेखि नै गोल्फ खेल्न सुरु गरेकी थिइन् । उनका बुवा प्रकाश पादुकोण आफैं पनि ब्याडमिन्टनका लेजेन्ड हुन् । आफ्नो बुवाबाटै प्रभावित भएर अनिशाले गोल्फ खेल्न सुरु गरेको बताउँछिन् । एक अन्तर्वार्तामा अनिशाले उनका मनपर्ने खेलाडी सायना नेहवाल भएको बताएकी थिइन्, विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा यो समाचार छ ।
उनले दीपिकालाई आफ्नो आमाले जस्तै केयर गर्ने बताएकी छिन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘दीपिकाले मलाई आमाले जस्तै माया गर्छिन् । उनी निकै केयररिङ र प्रोटेक्टिभ छिन् । कामका कारण हाम्रो धेरै भेट हुँदैन तर जतिबेला हामी भेट्छौं तब निकै राम्रो समय बिताउँछौं ।’
दीपिकाको फिल्मबारे कुरा गर्दै अनिशाले भनेकी थिइन्, ‘म उनको सबै फिल्म हेर्छु । मलाई उनको ए जवानी हे दिवानी र लभ आजकल निकै राम्रो लाग्छ । यसका साथै उनले लफंगे परिन्देमा पनि राम्रो काम गरेकी छिन् ।’
अनिशालाई दीपिकाको ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ फिटिक्कै मन नपरेको उनी बताउँछिन् । बलिउडका थुप्रै कार्यक्रममा अनिशा दीपिकासँगै देखिन्छिन् । फिल्मफेयर अवार्डको क्रममा पनि दुबै दिदिबहिनी सँगै देखिएका थिए । दीपिका र अनिशा दुबै आ–आफ्नो क्षेत्रमा निकै चर्चा बटुलिरहेका छन् । खेल जगतमा अनिशाको नाम शीर्ष स्थानमा आउने गर्दछ ।
दोस्रो चुनावमा पनि सुर्य उदायो, कांग्रेस दोस्रोमा माओवादी गाउँमै सिमित [अपडेट]
निलुको अन्त्येष्टिमा कलाकारहरुको घुइँचो